Waxaan ka hadleynaa Apple Music, IOS 8.4 iyo iOS 9 beta 2 | Wararka IPhone
5 × 38 Podcast ee Actualidad iPhone: Waxaan ka hadleynaa Apple Music, IOS 8.4 iyo iOS 9 beta 2
Tani waxay ahayd toddobaad ka buuxo warar kadib macruufka 8.4 sii daayo, taas oo ay weheliso hordhaca Apple Music, barnaamijka madadaalada muusigga ee Apple. Nasiib darrose, macruufka 8.4 wuxuu sidoo kale siinayaa cayayaanka cajiibka ah tiro isticmaaleyaal ah oo dhibaato ku qaba GPS-ka. Barnaamijkeenan maanta waxaan ku sheegeynaa sida loo xaliyo fashilaadan.
Waan falanqeyneynaa Apple Music oo waxaan kuu sheegeynaa sir kale, sida sida loogu kiciyo mid ka mid ah heesahaaga qaylo-dhaan ama sida loo abuuro liisaska (maaddaama hawshu xoogaa adag tahay, haddii aan barbar dhigno Spotify). Waxaan galnaa a dood kulul wixii ku saabsan go'aannadii ugu dambeeyay ee Taylor Swift waxaanan aruurineynaa dhammaan fikradaha aad noogu soo dirtay toos adigoo u maraya Periscope, laakiin sidoo kale hashtag #podcastiphone ee Twitter. Tani, iyo wax badan oo dheeraad ah, oo ku saabsan bandhigga maanta.
On show maanta ka qaybgal:
Kusoo qor barnaamijka wararka ee iPhone Podcast ee iTunes Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » 5 × 38 Podcast ee Actualidad iPhone: Waxaan ka hadleynaa Apple Music, IOS 8.4 iyo iOS 9 beta 2
TaiG waxay sii deyneysaa nooca 2.3.0 oo ay kujirto isdhexgalka Cydia 1.1.19
Kiisaska ugu fiican ee biyuhu xireen ee iPhone 6